Wararka ku gadaaman sida u isu dilay Jilaaga caanka ah ee Sushant Singh Rajput | Saxil News Network
August 8, 2020 - Written by editor
Sushant Singh Rajput wuxuu ku noolaa nolol aan caadi ahayn oo la mid ah midda uu ku jilayay qaar ka mid ah filimaantiisii ugu dambeeyay ee Bollywood-ka.
Balse hammigii fogaa uu lahaa Sushant Singh Rajput oo nolosha meel hoose ka soo billaabay waxay soo afjarantay 14-ka June markii la arkay isaga oo meyd ah da’diisuna ay ahayd 34 jir.
Booliska magaalada Mumbai uu ku noolaa waxay sheegeen atooarahaasi inuu isagu isdilay.
Geerida Jilaaga ayaa noqotay mid ay ka argagaxeen taageerayaal malaayiin ah, oo guushiisa u arkayey guul ay iyagu gaareen.
Sushant wuxuu ku soo koray Bihar oo ka mid ah gobollada ugu saboolsan dalka Hindiya. Wuxuu ahaa nin dadaal badan wuxuuna ku biiray jaamacadda cilmiga Injineeriyadda lagu barto oo ugu caansan dalka Hindiya.
Balse qalbigiisa wuxuu ku sii jeeday meel kale. Wuxuuna joojiyey waxbarashadii jaamacadda wuxuuna aaday magaalada Mumbai, magaaladaasi oo ah magaalo maalin walba dad badan u rumeyso riyooyinkooda kuwa kale ka jebisa.
Wuxuuna billaabay howla yar yar inuu qabto, wuxuuna qaban jiray shaqooyinka ay dadku badankood qaban wuxuuna sanada badan uu ka shaqeeyey shaneemo isaga oo markii dambe barnaamij caan ah ku yeeshay telefishin dalkaasi ku yaalla. Guulo horleh ayaana u billaabatay atoorahaasi.
Qoraalka sawirka,Wuxuu ahaa nin gaaddaciyaarka ku wanaagsan oo masraxyada ku soo bandhiga
Warka ku saabsan geeridiisa dhallinyaro badan oo magaalooyinka ku sugan oo si weyn Jilaagaasi u taageerayey ayey ku abuurtay naxdin aad u weyn.
“Waan ogaa dadkii kugu kallifay waxa aad sameysay”
Markii la ogaaday geeridiisa wixii ka dambeeyey warbaahinta dhexdeeda waxaa dood ka abuuray sheekooyinka garka ah ee ku saabsan Sushan isda dhaqaalahiisa, xiriirkiisa noololeed iyo caafimaadkiisa maskaxeed.
Iyada oo ay booliska dhimashadiisa faahfaahinno badan aysan ka bixinin ayaa waxay taasi horseeday hadallo iyo ku tiri ku teen badan oo ku aadan geeridiisa.
Si xun ayaa loola dhaqmay
Maalmo kaddib dhimashadiisa, qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala baraha bulshada waxay ku doodayeen inuu jilaaga uu isdilay maadaamaa uu dhaqan xumo daran kala kulmay qoysaska Bollywood ugu caansan iyo soo saarayaasha filimaanta.
Booliska Mumbai weli waxay wadaan baritaan la xiriira waxa geerida atooraha sababay. Booliskana waxay su’aalo weydiiyeen in kabadan 50 qof oo bahda filimaanta jisho ka mid ah si ay u helaan caddeymo ku saabsan waxa ku kallifay inuu isdilo. Waxay booliska kiiska gacanta ku haya laga sugayaa iney soo saaraan warbixinta ugu dambeysa ee baaritaankooda.
Eedeymahan ayaa horseeday caro ballaaran oo baraha buslhada ay dadka ugu soo gudbinayaan agaasimayaasha iyo soosaarayaasha lagu tuhusan yahay inay si xun ula dhaqmeen atoorahan isdilay.
Karan Johar, oo ka caawiya inay xirfadda aflaanta ku soo biiraan carruurta atoorayaashii hore ayaa si gaar ah loo bartilmaameedsaday.
Karan kama uusan jawaabin dhaleeceyntaasi loo soo marsiiyay baraha bulshada, booliiskuna waxa su’aalo ah ma aysan weydiinin.
Iyada oo ay dooddasi taagan tahay, warbaahinta qaar waxay farta ku fiiqeen Rhea Chakraborty, oo ah saaxibadda atooraha geeriyooday.
Sushant aabbihii ayaa Rhea ka dacweeyey booliska gobolka Bihar oo uu ku nool yahay. Wuxuuna ku eedeeyey dilka iney xiriir la leedahay lacagtiisana ay ku tagrifaleysay.
Warbaahintana waxay markiba la boodeen warka cususb ee ka soo yeeray waalidka Sushan.
Baraha bulshada Rhea waxaa looga yeeray “middi qaadatay lacata Sushant”
Rhea waxay sheegtay ineysan wax khalad ah sameynin iyada oo wasiirka arrimaha gudaha Amit Shah ka dalbatay dhimashada Sushant in baaritaan caddaalad ah lagu sameeyo.
Wixi markaa ka dambeeyeyna wakaalado kala duwan oo baarista ku howlan ayaa su’aalo dhowr ah weydiiyey.
Waarka kale ee laga baahiyey
Telefishiinnada kala duwan iyo bogagga wararka laba siyaabood ayey geerida Sushant uga warrameen.
Dadka qaar waxay aaminsan yihiin waxa ku kallifay iney noqon karto arrima Rhea la xiriiro ama cadaadis uu kala kulmay soo sarayaasha filimaanta, halka ay qaarna aaminsan yihiin geeridiisa iney shaki badan leedahay.
Atooreyaashii dhintay iyagoo jilaya filimadoodii ugu dambeeyay
Qoraalka sawirka,Sushant 34 jir ayuu ahaa marka u dhimanayey
Dr Soumitra Pathare oo ku takhasusay caafimaadka maskaxda wuxuu leeyahay warbaahinta kala duwan waa iney ilaaliyaan anshaxa u yaalla ayna ka waantoobaan iney tabiyaan mawduucyo xasaasi ah sida dadka isdilo.
“Balse nasiib darro, waraabhin badam uma hoggaansamaan shuruucda anshaxa ee warbaahinta u yaalla. Mana ah iney illoobaan mas’uuliyadda saaran,” ayuu ku daray.
XIGASHADA SAWIRKA,HINDUSTAN TIMES
Halka warbaahinta qaarna ay geerida atooraha la xiriirinayaa caafimaad darroo dhinaca maskaxda oo la soo deristay.
Booliska Mumbai ayaa sida oo kale lagu dhaleeceeyey faahfaahinta ay bixiyeen sida atooraha marki noolashiisa ugu dambeysa waxyaabaha uu khadka ka baarbaaray.
Madaxa gobolka Bihar Nitish Kumar, ayaa ku taliyey kiiska iney baaraan wakaaladda dambi baarista federaalka, CBI ama Xafiiska dhexe ee dambi baarista.
XIGASHADA SAWIRKA,INDIA TODAY/INSTAGRAM
Qoraalka sawirka,Sushant Singh Rajput iyo Shekhar Kapur
Shekhar iyo Sushant waxaa lagu waday inay ka wada shaqeeyaan filim lagu magacaabo Paani, kaasoo uu qorshaha ahaa inuu soo baxo sanadkii 2015-kii, laakiin ay ku gacan seyrtay shirkadda filimada soo saarta ee Yash Raj Films.
Sanadkii 2016-kii ayuu Shekhar bartiisa Twitter-ka ku sheegay inuu aad ula dhacay qaabkii uu Sushant ugu diyaar garoobay filimkaas.
“Waxaan niyad jab weyn ka dareemayaa sida aad uga niyad jabtay Paani, laakiin waligey lama kulmin jilaa qaabka sidaas u wanaagsan ugu diyaar garoobay si uu qeyb uga qaato filim.”
Sushant Singh Rajput wuxuu sanadkii 2013-kii dhexda uga tagay musalsalkii Pavitra Rishta.
Waxaa lagu ammaanay inuu muujiyay karti dheeraad ah, taasoo soo jiidatay indhaha shirkadaha filimada sameeya.
Dhowr filim oo uu xifdaddiisa kusoo bandhigay waxaa ka mid ah PK, Raabta, MS Dhoni: The Untold Story iyo Chhichhore.
Kumuu ahaa Sushant Singh Rajput?
Sushant wuxuu magaalada Patna ee dalka Hindiya dhashay 21-kii bishii January ee sanadkii 1986-kii.
Ka hor inta uusan ku biirin filimada caadiga ah wuxuu markii ugu horreysay si weyn ugu soo caan baxay filimkii musalsalka ahaa ee ay Soomaalida sida weyn u xiiseyn jireen ee Pavitra Rishta.
Musalsallada kale ee uu kasoo muuqday waxaa ka mid ah Kis Desh Mein Hai Meraa Dil(oo ah kii uu jilista ku billaabay), Zara Nachke Dikha iyo Zee Cine Awards 2016.
Filimada caadiga ah ee uu xirfaddiisa jilaanimo kusii hormariyay waxaa ka mid ah PK, Raabta, MS Dhoni: The Untold Story iyo Chhichhore